गतवर्ष ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तोकेबमोजिम रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याएको बैंकले यस वर्ष राम्रो लाभांश दिनेमा लगानीकर्ताहरू आशावादी देखिएका थिए । आइतवार नेप्सेमार्फत बैंकले गतवर्षको मुनाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ५ दशमलव २६३ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावबाट असन्तुष्ट लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर विक्री गरी अन्तै नाफा सुरक्षित गर्ने योजना रहेको देखिन्छ ।
आइतवार प्रस्ताव सार्वजनिक भएको दिन २ सय ८० पटकको व्यापारमा १ लाख ५ हजार ४ सय ४० कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । त्यस दिन शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ रुपैयाँ घटेको थियो । बैंकको १ वर्षको कारोबार अवधिमा उच्च मूल्य रू. २ सय ५८ र न्यून मूल्य रू. १ सय ७६ छ । सोमवारको कारोबारमा अन्तिम मूल्य रू. २ सय ४५ कायम भएको छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको सोमवार भएको कारोबारको अन्तिम समयसम्म ७ हजार १ सय २८ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहे पनि खरीदका लागि कुनै पनि माग थिएन ।
2019-01-08 - 239 view(s) - abhiyan